Zvikonzero zvishanu zvekururamisa Kuhaya A Dhijitari Kushambadzira Agency Martech Zone
Chishanu, December 5, 2014 Douglas Karr
Vhiki rino ndanga ndichiverenga chinyorwa kubva kune yedhijitari yekushambadzira agency kuti nei uchifanira kuvashandira. Chikonzero chekutanga uye chikuru ndechekuti digital kushambadzira hunyanzvi. Handina chokwadi chekuti ndinobvumirana nazvo zvachose - ruzhinji rwemakambani atinoshanda nawo ane dhipatimendi rekushambadzira aripo ane hunyanzvi hunoshamisa uye isu tinowanzodzidza kubva kwavari sezvavanenge vachidzidza kubva kwatiri.
5 zvikonzero zvekururamisa kuhaya yedhijitari yekushambadzira agency
Bureaucracy - dhijitari agency haifanire kunetsekana nezve zvematongerwo enyika zvemukati, nyaya dzebhajeti, kuhaya / kudzinga basa, uye dzimwe nzvimbo dzekutarisisa idzo mushambadzi anoshanda pane bhizinesi anoda kuve nehanya nazvo. Dhijitari agency inoshandirwa iine zvinangwa chaizvo uye ivo vanofanirwa kuzadzisa izvo zvinangwa, zvikasadaro hukama hwacho hunopera. Nepo iyo agency inogona kudhura yakawanda paawa kupfuura zvinoita vashandi, iyo nguva yakashandiswa kuisa pfungwa pabasa riripo inogadzirira mutsauko.
upindo - kubvira Highbridge inoshanda nevatengi vanopfuura gumi nevaviri vanodzokororwa, isu tinokwanisa kuendesa bhizinesi software uye nekuparadzira mutengo kune vatengi vedu. Chikumbiro chakareruka chataita ndechekuti vatengi vedu vese vanoda mari inosvika zviuru zviuru zvemadhora pachigaro… asi isu tinotenga zvigaro makumi maviri uye tinopa chirevo sechikamu chedu hwekubvunza.
Results - zvibvumirano zvedu zvinouya nechiziviso chemazuva makumi matatu pasina mibvunzo yakabvunzwa. Vatengi vedu vanogona kumbomira kana kupedza hukama chero nguva kana ivo vasiri kuwana mhedzisiro yavanoda. Kana iwe uchihaya timu, mushandirwi ndiye ane basa rekuhaya, kudzidzisa, kuongorora, uye nekugona kupfura kwemushandi. Nedhijitari rekushambadzira agency, iwo mutoro wavo - kwete wako. Kana vakasatamba, unowana rimwe agency risina kutemwa nemusoro kwese.
kunyatsoshanda - Nekuti isu tinogadzira marongero pakati pevatengi pamatanho akasiyana mukushomeka kwavo, isu tinokwanisa kuyedza nemumwe mutengi uye kuburitsa nzira kune vese vedu vatengi. Izvo zvinoderedza njodzi uye inovimbisa yakagadziriswa mhedzisiro, ipfupiswa nguva, uye inoderedza huwandu hwemitengo uchiwedzera mhedzisiro.
Mapundu - Dzimwe nguva isu tinoshanda nemakambani ane mukurumbira pane imwechete kana maviri maitiro, saka kuyedza kwavo kuri kuramba kuchimanikidza munzira imwechete. Kana iwe uri guru guru reemail, email inovhuvhuta ichiva zano rako repamusoro rekuburitsa mhedzisiro. Iwe hauna nguva yekudzidza uye kuyedza nedzimwe nzira kuitira kuti uise tarisiro yako paunoziva iwe kuti uchawana mhinduro. Kuhaya agency kunokupa iwe mukana wekuchengetedza tarisiro yako, asi ziva maburi anogona kuzadzikiswa nedare.
Hubris yakapararira mukati memasangano makuru. Nezvemari zviwanikwa, panogara paine munhu anobvunza Sei tisingakwanise kungohaya mumwe munhu tozviita isu pachedu? Nemamiriro edhijitari anogara achigadzirisa uye vamiririri vachifanira kutenderera neshanduko, makambani anotambura nenyaya dzezviwanikwa, maturusi asina kukwana, maitiro asina kukwana uye zvimwe zvinhu zvemukati zvinovatadzisa kuita nemazvo nzira dzavanoshuvira kuedza kana kukwana.
Vatambi vepamusorosoro vane zvakawanda zvakafanana - vanotsvaga vezvehutano, Vanachiremba, nyanzvi dzekugona, varairidzi, nezvimwe zviwanikwa zvekuvabatsira kuwana hukuru. Kuhaya dhijitari agency kunogona kunyatso kukubatsira kukwira nekukurumidza, kuita nekukurumidza, uye nekugadzira zvinoshamisa mhedzisiro isingakwanise kufananidzwa mukati. Kuhaya agency kunofanirwa kubatsira kambani yako kuwana hukuru hwekushambadzira kwedhijitari.
Tags: bokadigital agencydigital kushambadzira agencyzvikonzero neisei
DandyLoop: Govera Vatengi Pamhepo Pakati Pezvitoro
Mar 20, 2015 pa 6: 21 PM
Ini ndaizoshambadza 'inzwa inzwa' uye zvigunwe kumusoro kune iyo rondedzero iri pamusoro.
KuPeople Productions, takaona nevazhinji vevatengi vedu vemakambani kuti vanouya sei kwatiri kwete nekuda kwezvikonzero zvakanyorwa pamusoro chete, asi zvakare nekuti hukama hwatinosimbisa nemumwe. Kana mutengi asiya mubatanidzwa, haafanire kudzoreredza hukama - vanowanzo takura isu kuenda kukambani yavo inotevera. Izvi zvinovatendera kuti vadimbure chivakwa chekuvimba uye isu tinogona kazhinji kutanga kudzokera kumashure zvakare.
Iyi nheyo inotibvumira kuchera mukati memaitiro matsva uye matekiniki nekambani nyowani, tichishandisa hukama hwekushanda kupfupisa maviri maviri ekudzidza macurves emutengi mutsva UYE kutsvagisa. Izvi zvinobvumirawo mutengi kuti ataridzike senyeredzi yedombo, achiwana mibairo mikuru nekukurumidza.